Xidigaha Banadir Zone oo ku guulaystay tartanka Xiddigah kubadda Gacanta 2019+Sawirro
Monday, May 20th, 2019 - 13:52:29
Sunday May 05, 2019 - 22:58:50 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Gacanta ayaa soo gebogabeeyay tartanka xiddgaha kubadda Gacanta oo muddo todobaad ah ka socday xarunta degmada Cabdicasiis.
Tartanka waxaa ka qayb galay lix koox oo waxaana loo cayaarayay hal is arag, waxaana shanta kuan guulaystay oo tartanka hantay xiddigaha Banadir Zone .
Kulanka kama damabaysta tartanka oo lagu loolamayay kaalinta Labaad ee tartanka waxaa ku loolamayay Xiddgaha Astaan Sports iyo dhigooda General Daud GYM, waxaana kadib ciyaar ad loogu bogay ay guusha27-25 ku raacday xiddigaha Astaan Sports oo sidaasi ku xaqiijiyay booska labaad ee tartanka.
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Gacanta Maxamed Xuurshe Xasan Eenoow oo xaflada xeritaanka ka hadlay ayaa sheegay in tartanka xiddigaha ay kasoo muuqdeen xiddigo badan oo da’yar kuwaas oo mustaqbal ku leh cayaarta kubadda Gacanta.
Guddoomiyaha ayaa dhanka kale u mahad celiyay shirkadahatartanka taabagelntiisa ka qayb qatay ee cayaartoyda dhirogelinyay, macallimiinta iyo maamulka degmada Cabdicasiis oo xaruntooda uu tartanka ku qabsoomay door muhiim ahna ka qaatay.
Gebogabadii waxaa koobka kaalinta koowaadla guddoonsiiyayXiddigaha Matalayay Dugsiga Banadir Zone , waxaa sidoo kale kaalinta koobka kaalinta labaad lagu abaalmariyay xiddigaha Astaan Sports.